မီဒီယာနှစ်ပေါင်းမပြည့်စုံလိင်အဖြစ်ရောင်းချချင်ဘယ်အရာကိုမကြာခဏကြီးမားဖိအားအောက်မှာစုံတွဲများတတ်၏။ ဒါဟာရုပ်ရှင်, ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားမှတဆင့်လိင်စဉ်အတွင်း Instruments မျှော်မှန်းချက်၏ဤဖိအားကနေအခမဲ့ချိုးဖျက်ဖို့အချိန်ပါပဲ။
တင်သွင်းခဲ့တဲ့, လုံး, ကျွန်ခံ: ပန်းလိင် "Grey ကငါးဆယ် Shades" ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုကတည်းကနီးပါးမျိုးသုဉ်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
အဆိုပါရိုက်ကူးဟောလိဝုဒ်ဗားရှင်းမှာတော့ပထမဦးဆုံးရှက်နှင့်အတွေ့အကြုံ Anastasia sadomasochistic အမျိုးမျိုးလောကီသားတို့သည်အဖို့ Anastasia မိတ်ဆက်သူကိုလှပသောဘီလျံနာခရစ်ယာန် Gray, အဖြစ်အညီအမျှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်အောက်။
ဒါကြောင့်ပြီးသားတစ်ဦး queasy ခံစားချက်တဦးတည်းအပေါ်ကိုတက်တွားနိုင်ပါတယ်ကတည်းက: ကပြည့်စုံလိင်ဘဝကိုသရုပ်ပြနိုင်ဖြစ်ခြင်းမှကြွလာသောအခါ, တဦးတည်းအများဆုံးလူသိများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ပြီးသားကြိုးစားခဲ့ကြသင့်ပါတယ် - ဒါမှမဟုတ်စာရွက်များသို့ကအနည်းဆုံးအဖြစ်ဘုန်းစုပ်, အစဉ်မပြတ်ရုပ်ရှင်နှင့်သူရဲကောင်းလုပ်ဖို့ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရန်။
တစ်နေ့တာအတွက်နေ့ - သငျကွညျ့ရှုလေရာရာ၌, သင်ပါမယ်ကျေနပ်မှုအချင်းလူသား, ပြတ်သားခန္ဓာကိုယ်မြင်ဒီကနေပြီးပြည့်စုံသောလိင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ၏သင်တန်း, အဖြစ်မှန်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်: အအပန်းဖြေစိတ်ဖိစီးမှုအပြင်, အလုပ်နှင့်အိမ်ကမကြာခဏနည်းနည်းအချိန် left သို့မဟုတ်ပင်ပုံမှန်, ကျယ်ပြန့်လိင်ပျော်မွေ့ခြင်းငှါအလိုရှိ။ ဒါ့အပြင်တဦးတည်းအဆက်မပြတ်အများစုကြောင့်ကွာအချိန်မရှိခြင်း, TV ပေါ်မှာဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်ရရှိသည့်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ရန်နှင့် ပတ်သက်. ခေါ်ဆောင်သွားကျရောက်ပါတယ်။
အဲဒီအစားသူတို့က telly တစ်ဘုံရှေ့ညိတ်လိင်ဆက်ဆံစုံတွဲများ၏။ ကြှနျုပျတို့၏ဆကျဆံရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဘဝဒီတော့ပျင်းစရာကောင်း: အများအပြားမှာသဘာဝအံ့သြစရာကတည်းက? လိင်မဟုတ်တော့မိတ်ဖက်ဖို့ကိုစိတျဆိုး?
ဟမ်ဘာဂါလိင်သုတေသီများဒီဿုံပုံမှန်နှင့်မိတ်ဖက်များ၏ခေါ်ဆောင်သွား aura နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှိကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအတွက်တွေ့ပြီ။ ကြာကြာဆက်ဆံရေးကြာသည်လျော့နည်းရင်းနှီးသောအချင်းချင်းစုံတွဲများဖြစ်ကြသည်။
လတ်ဆတ်တဲ့စုံတွဲများတစ်လလိင်တစ်ချိန်ကအဘယ်အသက်အရွယ်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 ပျမ်းမျှအားနေပါစေရှိသည်။ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ပြည်သူ့4အချိန်ပေါ် "သာ" ပျမ်းမျှတစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်ပါ။ ဒါဟာကွောငျးထငျရှားဆက်ဆံရေး5သို့မဟုတ် 25 နှစ်ပေါင်းယခုကြာမြင့်ခဲ့ပြီးရှိမရှိအရေးမပါဘူးကြောင်းအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဤသည်အဓိကအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံရေး၏သင်တန်းအတွက်အတော်လေးသဘာဝကိုပြောင်းလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမူအကျင့်သုတေသနအထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးလိင်၏ကနဦးအဆင့်ရှိလူဂဟေဆော်ရန်စာအုပ်ချုပ်သမားအဖြစ်အသုံးပြုကြောင်းသဘောတူသည်။ ဆက်ဆံရေးကြာကြာထို့နောက်လိင်တစ်ဦးကိုပြန်လည်ထိုင်ခုံကြာ, ပိုဆက်လက် - အခြားသောအရာတို့ကိုအာရုံသို့ဝင်ကြလော့။ မကြာခဏ, မေးခွန်းထို့နောက်အရာအားလုံးဖြစ်ရပြီလိုခြင်းရှိမရှိပေါ်ပေါက်။
ဟုတ်ပါတယ်, အဲဒါကို "ဟု" မသေးဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရပါမည်။ ဒါပေမယ့်လိင်ဘဝတစ်ဦးဆက်ဆံရေးသင်တန်းတွင်ပြောင်းလဲသွားမယ့်အချက်ကိုဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ သစ်တစ်ခုအနေအထားကြိုးစားရန်ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကို, ခဲပေါ်ပေါက်။
မကြာခဏဖြစ်နိုင်တဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အင်္ဂါဇာတ်ခြောက်သွေ့နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံဖို့ဒဆောင်ပုဒ်စူးစမ်း။ သူတို့အပြည့်အဝယုံကြည်ကိုးစားရာနေရာချသောတစ်မိသားစုဆရာဝန်, သူကံကောင်းသူများကလူ။
ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီမိတ်ဖက်၏လိင်နှင့် ပတ်သက်. အပေါငျးတို့သကြားဆက်ဆံရေးရဲ့အစမှာတည်ရှိသောအရာထဲကနေကွဲပြားခြားနားသည်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများကစကားမစပ် "တစ်ဦးချင်းစီလိင်" လိင်ကိုခေါ်တော့ဘူးမိတ်ဖက်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုနက်ရှိုင်းကြောင်းလိင်အလေ့အကျင့်, ပြောပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကားမစပ်, ဒီလည်းအားသာချက်များရှိပါသည်။
အတူတကွမိတ်ဖက်သူတို့ကိုပွညျ့စုံပေးပြီးသူတို့အတူတူအဘယ်အရာကိုအိပ်မက်နှင့်အလိုဆန္ဒများကိုစမ်းချင်လိင်ဘယ်လိုထွက်ရှာရန်။ လိင်ကုသထိုကဲ့သို့သောအချိန်များအတွက်ပြင်ပကနေသိပ်အများကြီးရေစီးကြောင်းပါဝင်သည်ယူဆဆန့်ကျင်သတိထား - ကထိုကဲ့သို့သောဖျောပွ "ငါး Grey က၏ Shades" သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအဖြစ်မော်ဒယ်များတိုင်ပင်ခြင်းကိုမည်သည့်အခန်းကဏ္ဍရှိသည်မဟုတ်သငျ့သညျ။
ဒီသင်တန်း၏ပိုမိုလွယ်ကူသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုတိုင်းလူ့ဖြစ်လျက်ရှိမှနေ့စဉ်အီတလီတို့ကြောင့်အပြုထက်ကပြောသည်။ ခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာအားဖြင့်ဒီနေ့စဉ် supersaturation လူတွေစိတ်ခံစားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားအောက်မှာလာသည်ဟုဆိုလိုသည်။ မီဒီယာကနေမိမိကိုမိမိနှင့်ထင်စူပါ Lovern အကြားအမြဲတမ်းနှိုင်းယှဉ်သာဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့လိင်ပျော်စရာဖြစ်သင့်သလဲ မဖြစ်နိုင်။
ပျော်စရာကြောင်းလိင်, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အတူသက်သာခံစားရသူကိုစုံတွဲများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစုံတွဲများယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်ပိုင်လိင်ကိုရှာပါ။ ဒါဟာကျနော်တို့အချင်းချင်းပြောဆိုရိုးရိုးသားသားတဦးတည်းသည်သင်၏ခေါင်းကိုတဆင့်တတ်သောအရာကိုပြောပါတယ်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာအမြဲလွယ်ကူပြီးလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပါတယ်။
ဒီအကွာအဝေးအတွင်းယဉ်ကျေးမှုလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးမရကတည်းက Stupidly, လိင်ဧရိယာမလုံလောက်သောဘာသာစကား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌ရှိသေး၏။ ဒါဟာအဆင်းလှလိင်ကောင်းကင်မှမကျနိုင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရပါမည်။ ကာမနှင့်အစဉ်အဆက်ကအမြဲတမ်းရုပ်ရှင်များတွင်ကြောင်းလမ်းပုံဖော်နေသည်ရင်တောင်ကောက်ကာငင်ကာမီးတောင်များကဲ့သို့ထွက်မချိုးပါလိမ့်မယ်လို့မရပါဘူး။ ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုသငျသညျအကွောငျးကိုတစ်ခုခုလုပ်လိုအပ်သည်။
သငျသညျကျေနပ်မှုဖြစ်နိုင်အောင်လိင်ဘဝဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ ဒါဟာအမြဲလွယ်ကူသည်မဟုတ်, တစ်လမ်းအမြဲရှိပါတယ်။
အချိန်ဇယားအပေါ်လိင်: တဘို့စောင့်ဆိုင်းနေရုတ်တရက်တပ်မက်သောစိတ်ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးနေသည်, 'Liebesmühတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်။ ခေတ်သစ်လူတွေစီစဉ်ခြင်းနှင့်တဆင့်သူတို့ရဲ့တစ်နေ့လုံးတညျဆောကျပုံ - ဒါကြောင့်လိင်မှကြွလာအဘယ်ကြောင့်မပေးမယ့်အခါ, ၏သင်တန်း, ဒီအတော်လေး unromantic အလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့် unperfekter လိင်အဘယ်သူမျှမလိင်ထက်ဝေးပိုကောင်းသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
Interpersonal စကားလက်ဆုံ: ဖောက်လုပ်ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားအစီအစဉ်များ, လိင်နှင့် ပတ်သက်. စကားပြောနေစဉ်ပြီးသားမိမိပျော်မွေ့များအတွက်ရှေ့ပြေးဖြစ်နိုင်သည်။ တဦးတည်းနေ့တိုင်းမွန်းတည့်တူညီပန်းကန်မဟုတ်ပါဘူးသကဲ့သို့ပျင်းစရာနှင့် Bland ရေရှည်မှာလည်းအိပ်ရာအတွက်သီးသန့်လိင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကန်ရိုးရှင်းစွာအသစ်ပုံမှန်မဟုတ်သောသောအရပ်တို့ကိုရှာကြံမည်အကြောင်း,.
အချိန်အကူအညီနဲ့ယူ: အဆိုပါ counterparty blissfully အဆိုပါကူသို့စုံလင်သောပွညျ့စုံအတွက်လဲသည်အထိရုပ်ရှင်များတွင်သာမိနစ်အနည်းငယ်လွန်သွားနေစဉ်, ဒါကြောင့်အဖြစ်မှန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားပြေး - နှင့်အကောင်းတစ်ဦးအရာပါပဲ။ ဒါခေါ် "အနှေးလိင်" နှေးကွေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူထွက်ယူသွားပေမယ့်အားလုံးပိုမိုပြင်းထန်သောဖြစ်ပါတယ်။ လိင်၏အရည်အသွေးလျှင်မြန်စွာမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အသစ်သောအတွေးအခေါ်များမှပွင့်လင်း Be: စာအုပ်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ထဲကနေရည်ညွှန်းကြသည်လှုံ့ဆော်မှု, သေချာပေါက်မကောင်းတဲ့ဖြစ်မရှိပါ။ ဒါဟာထဲကကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာခြေချင်း, လုံးနှင့်မီးအတူတူမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာတစျခုမှာလုပ်နိုင်တဲ့မျက်စိကိုချိတ်ဆက်ဖို့ရိုးရှင်းစွာအဆအားဖြင့်စတင်ပါ။ ဒါဟာကိုယ့်နှစ်ဖက်စလုံးအားဖြင့်သက်သာခံစားရကြောင်းသစ်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးအစားအားလုံးကိုရောက်ရှိမူတည်ပါသည်။ အရှင်လိင်သည်ကောင်းပါကတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးမျှမလက်ခံခဲ့သည်မည်ဖြစ်ကြောင်းအရေးကြီးပါသည်။
relationship Killer | မိတ်ဖက်များနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုး
ကာမနှင့်အာဟာရ | ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
လှည့်ဖြားခဲ့ - သောအရာကိုယခု? | ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုများ - ကံကောင်းတာနှိပ် | ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
မိတ်ဖက်နှင့်ကလေးများ | မိသားစု
| အမည်များနှင့်၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
မိဘများလည်းတစ်အားလပ်ရက်လိုအပ် | မိတ်ဖက်ကလေးများ
အသက်အရွယ်ကွာခြားချက် | မိတ်ဖက် & ချစ်ခြင်းမေတ္တာ